ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကို (၂)နှစ်ဆက် မဆုံးရှုံးရအောင် ကြိုးစားရမယ့် အာဆင်နယ်
ယူရိုပါလိဂ်ဖလားဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် မျှော်လင့်ချက်အတွက် နောက်ဆုံးကောက်ရိုးတစ်မျှင်
5 Apr 2018 . 3:48 PM
ယူရိုပါလိဂ်ဖလားဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဒီရာသီ သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ ရလဒ်တွေအပေါ် အားမလိုအားမရဖြစ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။ အရင်နှစ်တွေကတည်းက
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အနေအထားက ကျရိပ်ပြလာခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တစ်နေရာကို ပုံမှန်ရယူခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးစာရင်းဝင်အသင်းတစ်
သင်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက FA ဖလား ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့်(၅)နေရာသာရခဲ့တာကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၂၀)အတွင်း
သာမက အာစင်ဝင်းဂါး လက်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် လွဲချော်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာလည်း
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အခြေအနေက အပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ခဲ့ဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့်(၆)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး အဆင့်(၄)နေရာက စပါးအသင်း
နဲ့ (၁၃)မှတ်အထိ ကွာဟနေလို့ လက်ကျန်(၇)ပွဲသာ လိုတော့ချိန်မှာ ဒီလောက်အထိ အမှတ်ကွာဟမှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုတာ difficult အဆင့် မဟုတ်ဘဲ Impossible အဆင့်အထိ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက် စပါးအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ရလဒ်ပိုင်းက တည်ငြိမ်မှုအပြည့်ရှိပြီး နောက်ဆုံး (၄)ပွဲ
လောက်အထိ ဆက်တိုက်ရှုံး၊ အာဆင်နယ်ကလည်း ပွဲတိုင်းနိုင်မှ ဂန်းနားတို့ အဆင့်(၄)နေရာကို မှန်းနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အဆင့်(၄)
နေရာရဖို့ထက် ယူရိုပါလိဂ်ဖလားရယူပြီး လာမယ့်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ပဲ ကြိုးစားရတော့မှာပါ။ အာစင်ဝင်းဂါးကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီအခြေအနေကို လက်ခံထားပြီး ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားတော့မယ်လို့ ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်
မှာ အေစီမီလန်ကို ခြေစွမ်းပြပြီး နှစ်ကျော့စလုံးအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ဘက်ဟောင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ CSKA မော်စကိုနဲ့
ဆုံတွေ့နေပါပြီ။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ CSKA မော်စကိုနဲ့ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆင့်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့တုန်းက အဝေးကွင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့
ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အခု CSKA မော်စကိုနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ယူရိုပါလိဂ်မျှော်လင့်ချက်အတွက်
နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ တကယ်လို့ ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ရင်လည်း အက်သလက်တီကို၊ လာဇီယို၊ မာဆေးလ်(ဒါမှမဟုတ်) လိုက်ပ်ဇစ် စတဲ့အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းသင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားရှိနေလို့ အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ခရီးကြမ်းကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရ
မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကတော့ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ လက်မှတ်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီဖလားအတွက် ဖောင်ဖျက်
ကစားရမယ့် အနေအထားပါ။ အာဆင်နယ်အသင်း နောက်ဆုံးကောက်ရိုးမျှင်ကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်မလား၊ လက်လွှတ်လိုက်ရမလားဆိုတာကတော့ . . . . . . .
ယူရိုပါလိဂ္ဖလားဟာ အာဆင္နယ်အသင်းရဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ်ဝင္ခြင့်
အာဆင္နယ္ပရိသတ်တြေအတြက်တော့ ဒီရာသီ သူတို့အသင်းရဲ့ျေခစြမ်းနဲ့ ရလဒ်တြေအေပါ် အားမလိုအားမရျဖစ်နေတာ အမွန္ပါပဲ။ အရင္နွစ်တြေကတည်းက
အာဆင္နယ်အသင်းရဲ့ အေနအထားက က်ရိပ်ျပလာခဲ့ပေမယ့် ခ်န္ပီယံလိဂ်ဝင္ခြင့္တစ်နေရာကို ပုံမွန်ရယူခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂ္ထိပ်သီးစာရင်းဝင်အသင်းတစ်
သင်းအျဖစ် ရပ္တည္နိုင္ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက FA ဖလား ခ်န္ပီယျံဖစ္ခဲ့ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ အဆင့်(၅)နေရာသာရခဲ့တာကြောင့် နွစ်ပေါင်း(၂၀)အတြင်း
သာမက အာစင်ဝင်းဂါး လက္ထက် ပထမဆုံးအကြိမ်အျဖစ် ဒီရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ်ပြိုင္ပဲဝြင္ခြင့် လဲခြေ်္ခာဲ့တဲ့ မွတ္တမ်းဆိုးကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီမွာလည်း
အာဆင္နယ်အသင်းရဲ့အျေခအေနက အေပါင်းလက္ခဏာမေဆာင္ခဲ့ဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ အဆင့်(၆)နေရာမွာ ရပ္တည်နေပြီး အဆင့်(၄)နေရာက စပါးအသင်း
နဲ့ (၁၃)မွတ်အထိ ကြာဟေနလို့ လက္က်န်(၇)ပဲသြာ လိုတော့ခ်ိန္မွာ ဒီလောက်အထိ အမွတ္ကြာဟမှုကို လွေ်ာ့ခ်နိုင္ဖို့ဆိုတာ difficult အဆင့် မဟုတ္ဘဲ Impossible အဆင့်အထျိဖစ်နေပါပြီ။ ဘျာဖစ္လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ပြိုင္ဘက် စပါးအသင်းရဲ့ျေခစြမ်းနဲ့ရလဒ္ပိုင်းက တည်ငြိမ္မှုအျပည့်ရွိပြီး နောက္ဆုံး (၄)ပြဲ
လောက်အထိ ဆက္တိုက်ရှုံး၊ အာဆင္နယ္ကလည်း ပဲတြိုင်းနိုင္မွ ဂန်းနားတို့ အဆင့်(၄)နေရာကို မွန်းနိုင္မွာပါ။ ဒါကြောင့် အာဆင္နယ်အသင်းဟာ အဆင့်(၄)
နေရာရဖို့ထက် ယူရိုပါလိဂ္ဖလားရယူပြီး လာမယ့်ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ်ဝင္ခြင့်ရဖို့ပဲ ကြိုးစားရေတာ့မွာပါ။ အာစင်ဝင်းဂါးကိုယ္တိုင္ကလည်း ဒီအျေခအေနကို လက္ခံထားပြီး ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင္ပဲမြွာ ဗိုလ္စဲဖြို့ကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားတော့မယ္လို့ ၀န္ခံျေပာဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာဆင္နယ်အသင်းဟာ ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင္ပဲမြွာတော့ ရလဒ်ကောင်းတြေ ရယူနေပြီး ကြာတားဖိုင္နယ်အဆင့္ကို ရောက်ရွိနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရှုံးထြက်(၁၆)သင်းအဆင့်
မွာ အေစီမီလန္ကိုျေခစြမ်ျးပပြီး နွစ်ကေ်ာ့စလုံးအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာတော့ ခ်န္ပီယံလိဂ်ပြိုင္ဘက်ဟောင်းတစ်သင်းျဖစ္တဲ့ CSKA မ္စောကိုနဲ့
ဆုံတြေ့နေပါပြီ။ အာဆင္နယ်အသင်းဟာ CSKA မ္စောကိုနဲ့ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ်ပြိုင္ပြဲ အုပ္စုအဆင့္မွာ ဆုံတြေ့ခဲ့တုန်းက အေ၀းကြင်းမွာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့
ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အိမ္ကြင်းမွာ ဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အခု CSKA မ္စောကိုနျဲ့ပန္ဆုံတြေ့တဲ့ပဲဟြာ အာဆင္နယ်အသင်းရဲ့ ယူရိုပါလိဂ်မွေ်္လာင့္ခ်က်အတြက်
နောက္ထပ် စိန်ခေါ်မှုတစ္ချုဖစ္လာမွာပါ။ တကယ္လို့ ဆီမီးဖိုင္နယ္တက်ရောက္နိုင္ခဲ့ရင္လည်း အက်သလက္တီကို၊ လာဇီယို၊ မာဆေးလ်(ဒါမွမဟုတ်) လိုက္ပ္ဇစ် စတဲ့အသင်းတြေထဲက တစ်သင်းသင်းနဲ့ ဆုံတြေ့ရမယ့်အေနအထားရွိနေလို့ အာဆင္နယ်အသင်းအေနနဲ့ ယူရိုပါလိဂ္ခရီးကြမ်းကို ဆက္လက်လွေ်ာက္လွမ်းရ
မျွာဖစ္ပါတယ်။ အာဆင္နယ်အသင်းအတြက္ကေတာ့ ယူရိုပါလိဂ္ဖလားဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ်ပြိုင္ပဲဝြင္ခြင့်ရဖို့ လက္မွတ်ျဖစ္တာကြောင့် ဒီဖလားအတြက် ဖောင္ဖ်က်
ကစားရမယ့် အေနအထားပါ။ အာဆင္နယ်အသင်း နောက္ဆုံးကောက်ရိုးမ်ွင္ကို ဆုပ္ကိုင္နိုင္မလား၊ လက္လွှတ္လိုက်ရမလားဆိုတာကေတာ့ . . . . . . .